ओसामा बिन लादेन अझै ज्युँदै ! - inaruwaonline.com
ओसामा बिन लादेन अझै ज्युँदै !
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २५, २०७२ समय: ८:५५:२०
२५ माघ, मस्काे ।विश्वका नजरमा २०११ मा अमेरिकाको विशेष सुरक्षा बलको आक्रमणमा मारिएका अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठन अलकायदा प्रमुख बिन लादेन जिवितै भएको खबर छ। अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी सीआइएका पूर्व कर्मचारी एडवर्न स्नोडेनले लादेन जिवितै रहेको दाबी गरेका हुन्।
स्नोडेनले लादेन सीआइएको सबैभन्दा योग्य एजेन्ट भएको दाबीसमेत गरेका छन्। उनले यदि अमेरिकाको सिल कमाण्डोले लादेनलाई मारेको भए विश्वभर सीआइएको कामप्रति नकारात्मक सन्देश जाने र सीआइएको संगठनसमेत कमजोर हुने दाबी गरेका छन्।नागरिकन्युजबाट